सुन र पित्तल बिचको तात्विक भिन्नता लगानिकर्ता आफैले छुट्याउन सक्नुपर्छ! « LiveMandu
सुन र पित्तल बिचको तात्विक भिन्नता लगानिकर्ता आफैले छुट्याउन सक्नुपर्छ!
२६ जेष्ठ २०७८, बुधबार १७:२९
१८८१ अंक सम्म पुगेको नेप्से ईन्डेक्स चार बर्षको निरन्तर गिरावटबाट १००० को लाईनमा आई धेरै समय पछी
परिसुचक पून: २९०० सम्म पुग्दा धेरै लगानीकर्तालाई लागेको थियो होला कि अब बजार प्रवेश गर्न ढिलो भैसक्यो। तर बजारमा बिल्कुलै त्यस्तो हुँदैन । बढ्दो बजारले बिश्वासको बातावरण सृजना गर्दै अवसरको दायरा झन् बढाउँदै लैजाने हुँदा यो समयमा राम्रा राम्रा कम्पनी छनौट गर्दै लगानी बढाउनु बुद्दिमानी हुन्छ।
घट्दो बजारमा सेयरको कुरा सुन्ने बित्तिकै नाँक खुम्च्याउनेहरु र सेयर बारे जानकारी नै नभएकाहरुले समेत निरन्तरको बढ्दो बजारसँगै चासो देखाउने गरेको पाईन्छ। जसरि भ्याकुम क्लिनरले फोहोरहरुलाई तानेर एकतृत गर्छ, त्यसैगरी बढ्दो बजारले पनि भ्याकुम बनेर लगानिकर्ताको पैसालाई सोहोरेर बजार पूँजीकरणको थुप्रोलाई बढाउँदै लैजान्छ। बजारको बढ्दो सरगर्मी सँगै पुराना, संस्थागत, अवसर कुरिरहेका तथा नवप्रवेशीहरुको संख्या बढ्दै जान्छ र यसले थप उचाईको आधार तय गर्दै जान्छ । सेयर बजारलाई कतातिर डोहोर्‍याउने भन्ने कुरा लगानिकर्ताको मनोबोज्ञानले नै तय गर्ने बिषय हो। बजार एकैं दिनमा घट्दा लगानीकर्ताले यति गुमाएँ र बजार बढ्दा यति कुम्लाउँन सफल भएँ भन्ने जस्ता
सेयर बजारको बिषयलाई लिएर समाचार संप्रेषण गर्ने मिडियाहरुले लगानिकर्तालाई सबैभन्दा बढी भ्रमित र आशाबादि पार्ने गरेको पनि पाईन्छ। यस्ता हेडलाईनका समाचारहरु पनि ध्यान पुर्याउने गर्नुपर्छ ।
सेयर बजार भनेको दुई दिनको बजार हैन। दुई चार दिन बढ्दैमा अब संसारनै जितीने अनि दुई चार दिन घट्दैमा संसारनै सकिने पनि हैन। बजारको आफ्नै लय हुन्छ, आफ्नै चाल हुन्छ। बिभिन्न परिस्थितीले बजारलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको हुन्छ।